လောကကြီးမှာ ဆက်မနေ ချင်တော့ဘူးလို့ သူမရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး – Wun Yan
လောကကြီးမှာ ဆက်မနေ ချင်တော့ဘူးလို့ သူမရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့် လာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦး
ယခု သတင်းသည် Shwe Yaung Myanmar မှ ရေးသား ထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။
သ ရုပ်ဆောင်ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ တချိန်က ကြော်ငြာဘုရင်မ လို့တင်စားရလောက်အောင် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သလိုအကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း အလီလီဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးမှန်းပရိသတ်ကြီးသိရှိကြမှာပါ။ ယခု အချိန်မှာတော့ မထက်တစ်ယောက် သေချင်လောက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီး အရာရာကို လက်လျှော့လိုက်ချင်ပြီလို့ ပြောဆိုလာခဲ့တာပါ။
ထက်ထက်မိုးဦး ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ သူမအတွက် Ve Ve Company ကသိန်း ၁၀၀ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သူမအနေ နဲ့ အခုလိုခက်ခဲနေချိန်မှာတချိန်က ကြော်ငြာတွေနဲ့ အတူတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ Ve Ve က အခုလိုထောက်ပံ့ပေးတာကို ဝမ်းသာမိတယ် လို့လည်းဆိုပါတယ်။မထက်က အခုလက်ရှိသူမရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို
“အခုဗိုက်ခွဲထားတဲ့ဒဏ်ရာကတော့ မသက်သာသေးပါဘူး။နောက် ၂ ရက် ၃ ရက် နေရင် ပြန်ပြရမှာပေါ့။ကောင်းကောင်းအနားမယူလို့ လို့တော့ ဆရာမကပြောပါတယ်။ခွဲစိတ်ပြီးသွားရင် ၂ လလောက်တောနားသင့်တယ်ပေါ့။ကိုယ်ကမနားပဲ ချက်ချင်းအလုပ်ထဲဝင်တယ်…ပြီးတော့ အနာကြီးရှိရဲ့သားနဲ့ လည်း လိမ့်ကျသွားတယ် ဆိုတော့ အဲ့လို အတွင်းချုပ်ရိုးတွေက မကောင်းသေးဘူးပေါ့ ” လို့ဖွင့်ဟ လာခဲ့ပါတယ်။”မင်းသမီးတွေလဲအများကြီးပဲ ကိုယ့်လို နှလုံးခွဲရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လည်ပင်းခွဲလိုက်ရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲ ကိုယ့်လို ဗိုက်ကို ခဏခဏခွဲရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး…. အော်ငါကျမှ ဖြစ်တာပဲလားပေါ့နော်…. တခါတလေကျရင် လူ့ဘဝကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ မလျှောက်ချင်တော့ဘူးလို့ ခဏခဏပဲ တွေးမိတယ် ဒီလောကကြီးမှာဆက် မ လျှောက်ချင် တော့ဘူးလို့ ခဏခဏ တွေးမိတယ်။ပိုက်ဆံ တစ်ခုတည်း ခက်ခဲတာမဟုတ်ပါဘူး.ကျန်တဲ့အရာတွေ အကုန်လုံးကလည်းအများကြီးပဲ ခက်ခဲတယ်”ဆိုပြီးရင်ထဲက ခံစားချက် တွေကို ဖွင့်ဟလာခဲ့တာပါ။
“ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းနေနေ ဘယ်တော့မှလည်းအကောင်းပြောမခံရဘူး…. တခါ တလေတော့လည်း ဝမ်းနည်းတာပေါ့။စိတ်ဓာတ်လည်းအရမ်းကျတယ်။ငယ်တုန်းကတော့ မိဘနဲ့တူတူမနေရဘူး ဟိုလူ့နားပြေးကပ်လိုက်ဒီလူ့နားပြေးကပ်လိုက်နဲ့တခါတလေ အဖေ့ကိုလည်း စိတ်မကောင်းဘူး ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ပစ်ထားပြီးတော့မှ အခုကျတော့ အကုန်လုံးက ခါးစည်းပြီး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းခံရတယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး…ဒါမဲ့ မိဘနဲ့ သားသမီး ဆိုတော့ အကောင်းဆုံးတော့ အဖေ့ကိုမရှိတာရှိတာ အကုန် လုပ်ပေးမယ်လို့ တော့ စိတ်အားတင်းပြီးနေတာပဲ…. တကယ်ကျတော့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး လူတောထဲလည်းမသွားချင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုလာခဲ့တာပါ။
သူမအတွက် သူမပရိသတ်တွေ ကသာ အားတင်းစရာဖြစ်တာမို့ သူမကိုဆက်ချစ် ဆက်အားပေးပေးပါ လို့လည်းတောင်းဆိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးတစ်ယောက် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောကြားလာတဲ့ စကားသံတွေကို ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အားလုံးပဲ မထက်ကို ချစ်ကြသေးရင် အားပေးစကားလေးပြောပေးခဲ့ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်နော်။
Credit : Shwe Yaung Myanmar
အဆိုတော် ယုန်လေးအား အနုပညာ လှုပ်ရှားခွင့် (၁) နှစ် ပိတ်လိုက်သည်
ပုံစံ အသစ်တစ်မျိုးနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာ အသစ်လေး
ယုန်လေးရဲ့ MV နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တုန့်ပြန် ပြောဆိုလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို
အဆိုတော် ယုန်လေးရဲ့ Music Video အပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်လာခဲ့တဲ့ လင်းလင်း
၂၀၂၀ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ကြည့်ရှုရန်
လက်ကောက်ဝတ် လမ်းကြောင်းနှင့် ထူးခြားသော မှတ်ချက်များ
မျက်မှန် လွတ်စေတဲ့ မျက်ကြည် စားဆေး
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အသစ်၊ သက်တမ်းတိုး၊ အပျောက်လျှောက်ရင် ကုန်ကျမည့် စားရိတ်